I can't enter cmd in Run - MYSTERY ZILLION
မူလ › Windows › Windows XP ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
I can't enter cmd in Run
aungkyawzeya June 2011 edited June 2011 in Windows XP ကျွန်တော် Run Box ထဲမှာ cmd ခေါ်လို.မရတော.လို.ကူညီကြပါဦးခင်ဗျာ၊ ဒီလိုကြီးပဲပေါ်နေတယ်။"Window can not find 'cmd'.Make sure your typed the name correctly, and then try again.To search forafile,click the start button, and then click Search." Tagged:
saturngod June 2011 Administrators Malware ဝင်နေတာ ဖြစ်မယ်။ လက်ရှိ ဘာ antivirus သုံးလဲ။ http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free နဲ့ ရှင်းကြည့်ပါ။ aungkyawzeya June 2011 Registered Users ရသွားပြီကိုစေတန် မနေ.ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရေးတဲ. Coding ကို bat file လုပ်ပြီးစမ်းကြည်.လိုက်တာ။အခု cmd.exe ကို system 32 အောက်ထဲကိုထည်.လိုက်တာအိုကေသွားပြီ။ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ၊ အခုလိုပြန်ဖြေပေးတဲ.အတွက်။ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla